1. Betsaka ny olona efa zatra mampiasa solosaina Windows hatramin'ny ela ary mahita fa sarotra ampiasaina ny Mac, tsy fantatra hoe inona ny lakile mafana, tsy mahazatra azy ireo, tsy tsara kokoa izy ireo, raha ny marina, ny Mac dia rafitra fiasa miorim-paka. Izy io dia manana rafitra fiarovana ekena iraisam-pirenena izay mora ampiasaina kokoa noho ny eritreretinao. Androany dia hampahafantarinay ny fomba hakana pikantsary an'ny Mac OS, izay fomba maro sy mora be.
2. Sarimihetsika feno amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Shift + Command + 3 miaraka.
3. Rehefa re ny feon'ny snap iray Ny pikantsary nalaina dia ho voatahiry ao amin'ny Desktop ary azo ampiasaina araka izay ilaina.
4. Fisamborana vokatra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Shift + Command + 4 miaraka.
5. Hahita marika "+" manodidina ny bokotra totozy ianao. Tazomy ny tsindry havia ary sintomy ny faritra tianao hotifirina. Avotsory avy eo ny totozy. Ny sary nalainao dia ho voatahiry ao amin'ny Desktop.
6. Ohatra iray amin'ny sary voarakitra miaraka amina vokatra voafantina.
7. Fakan-tsary sy firaketana horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Shift + Command + 5 miaraka.
8. Ny rafitra dia hampiseho ny menio fisamborana hisafidianana araka ny aseho amin'ny sary.
9. Ny fiasan'ny menio tsirairay avy dia miankavia sy miankavanana: ● Alao ny efijery iray manontolo ● Ny varavarankely mihetsika ● Ny fakana sary voa-tanana ● Ny firaketana ny horonan-tsary rehetra ● Ny firaketana horonan-tsary nisafidy. Boky torolàlana ● Safidy fandidiana fanampiny ● bokotra fisamborana - fakana sary na firaketana - atombohy ny fandraisam-peo. Rehefa manomboka ny fandraketana horonantsary dia azonao atao ny mampijanona ny firaketana amin'ny fotoana rehetra amin'ny fipihana ny mari-pamantarana “◻” eo amin'ny tsoratry ny menio ankavanana. Rehefa tsindrio ny Stop, ho voavonjy ho azy eo amin'ny Desktop ny horonan-tsarinao.
10. Ary ireto misy torohevitra vitsivitsy azo ampiasaina mba hanafainganana ny zavatra raha misambotra ny efijery ny Mac anao. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana. Azonao atao ny mampiasa ny totozy hanindry sy hihazona ilay sary nijery mialoha ary hisintona ary hampidina azy ao amin'ny programa LINE na google docs mba handrosoana na hanohizana ny asa eo noho eo.
11. Avy amin'ny ohatra etsy ambony, dia azo jerena fa ireo mpamorona Mac OS toa an'i Apple dia mijery ny antsipiriany kely amin'ny asany. Na dia maka pikantsary misy fiasa maro isafidianana aza. Mitahiry fotoana be dia be amin'ny fanapahana sary na horonan-tsary. Afaka manafatra rakitra izay efa nampitaina na nampiasaina avy hatrany. Misy ihany koa ny torohevitra mahasoa amin'ny fampiasana Mac OS hanampiana ny asanao ho mora sy haingana kokoa. Tsindrio raha hanaraka ny tranokalanay hahazoana vaovao sy lahatsoratra mahaliana izay hapetrakay amin'ny fotoana manaraka.